Badube ingqungquthela aboshintsho | Isolezwe
Badube ingqungquthela aboshintsho
Isolezwe / 19 December 2012, 1:59pm /
(President Zuma shares a light moment with Deputy President Motlanthe) ANC Top Six L-R Dr Zweli Mkhize Treasurer, Mr Cyril Ramaphosa - Deputy President, Jacob Zuma - President, Ms Baleka Mbete - Chairperson, Mr Gwede Mantashe - Secretary General and Ms Jessie Duarte - Deputy Secretary General after their election into the 6 top positions in the ANC at the 53rd National Conference held at the University of Free State in Bloemfontein (Mangaung).
ZIDUBE zalaxaza phansi ingqungquthela yaseMangaung ezinye izithunywa ebezifuna uMengameli we-ANC ephumile esikhundleni emuva kokuba izimfuno zabo zithelwe othulini ngamavoti.
Ezinye izithunywa zaseLimpopo, zithe azisayingeni eyokuqhubeka nengqungquthela futhi ngeke zisayihlalela imigomo ngoba ebezikuzele sekuphelile.
Ezinye izithunywa bezikhombisa ukukhululeka kubonakala ukuthi bezimincile ngaphambi kokhetho.
Obekwenza zimince wukuthi ukhetho beluyimfihlo, kungasayi ngokuthi isifundazwe kumbe igatsha lakho likuthume ukuthi ukhethe baphi abaholi.
Bancane kakhulu abaphu-me benxothozela nokuyilabo abebeseka ukufakwa kuka-Mnuz Kgalema Motlanthe, nobuholi abebefuna bumese-ke, emuva kokuphuma kwemiphumela yokudla umhlanganiso kukaZuma nezakhe.
UMnuz Enerst Tiyesha waseMathole District esifundazweni i-Eastern Cape, uthi ubevotele uMotlanthe. “Sisodwa isizathu esingenze ngivotele uMotlanthe, bengifuna abaholi be-ANC bazi ukuthi kukhona abanye ngaphakathi abakunakayo ukuthi kwenzeka into okuyiyo ngempela yini embuthweni nakuhulumeni. Akumele abaholi abaningi kangaka bangakhuzani uma kunamaphutha enzekayo.
“Anginankinga noMsholozi futhi ngiyakwemukela ukukhethwa kwakhe. Engiku-thandazelayo wukuthi abaholi abaphumayo esigungwini esiphezulu bangadubi baye kwamanye amaqembu ngoba sisabadinga embuthweni sisewuKhongolose sonke,” kusho uTiyesha.
UNkk Joyce Dotyeni wesifunda i-O.R. Tambo e-Eastern Cape, ubehluleka ukufihla injabulo abenayo njengoba ebecula ingoma ehalalisela uZuma. “Ngithunywe ukuba ngivotele uZuma, ngenze njalo. Noma ngabe bengingathunyiwe bengizovotela uZuma noGwede Mantashe. UZuma ungumuntu wabantu, osondele kubantu futhi obazisayo. Uyakwazi ukuhambela izindawo zabantu. Uyakwazi eLebode, uyakwazi eMthatha, futhi nosizi lwakhona uyalwazi.
“Kanjalo noGwede unguNobhala oqotho. Hhayi ngoba ngimzonda uMotlanthe kodwa ubengakoni lutho uZuma nobuholi bakhe kwesabathuma khona ePolokwane futhi basenomsebenzi okusamele bawuqedele,” kusho uNkk Dotyeni.
Izolo bekulindeleke ukuthi ntambama kuqalwe kudingidwe imigomo ngokwezigcawu ezehlukene kuphinde kuqhutshwe nokhetho lwamalungu angu- 80 okwengeza. Imiphumela yalolu khetho ilindeleke ukuthi ikhishwe ngasekupheleni kwengqungquthela.